Akademia Miaramila : Mihamafy ny fiaraha-miasa amin’ny firenena Amerikana -
AccueilSongandinaAkademia Miaramila : Mihamafy ny fiaraha-miasa amin’ny firenena Amerikana
Akademia Miaramila : Mihamafy ny fiaraha-miasa amin’ny firenena Amerikana
Mpianatra ho manamboninahitra 30 mianadahy avy amin’ny firenena Amerikana no noraisin’ny sekoly nandritra ny 9 andro izay nifarana ny 2 jona lasa teo. Fifampizarana traikefa sy fianarana ny fomba amam-panao malagasy, indrindra fa ny tafika no isan’ny norantovin’ireo vahiny nandritra ny fivahinianany tao amin’ny sekoly. Marihina fa dia nanaraka ny fiainana sy ny kotrana ataon’ireo mpianatra ho manamboninahitra malagasy ireo vahiny ireo nandritra ny fotoana nijanonany tao amin’ny sekoly. Ankoatra izay ny fampianarany teny Anglisy sy ny fizarany traikefa, ary fahaiza-manao eo amin’ny samy mpianatra ho manamboninahitra na samy hafa firenena aza. Tsy teo amin’ny lafiny ara- miaramila ihany no nisian’izany fa nihitatra hatramin’ny fiarahamonina sy ny kolontsaina.
Mihamafy orina noho izany ny fiaraha-miasa satria tsy vao sambany akory no nandray mpianatra vahiny toa izao ny sekoly. Araka ny fanazavan’ny kaomandin’ny Akademia Miaramila, ny Jeneraly Ramasy Razafindratovo Heritiana dia efa misokatra ho antsika Malagasy ihany koa ny fifaninanana hidirana ho manamboninahitra ao Westpoint. Notsipihan’ny kaomandin’ny sekoly fa efa hatramin’ny taona 2015 no nandray mpianatra ho manamboninahitra vahiny toa izao ny sekoly, ary mitohy hatrany izany hatramin’izao.
Ho mariky ny fandalovan’ireo vahiny tao amin’ny Akademia dia notolorana mari-pankasitrahana ireo mpianatra ho manamboninahitra Amerikana ireo.